Monday May 18, 2020 - 12:12:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dhabar jab xooggan ayaa markale wadanka Liibiya lagu gaarsiiyay dagaal ooge Khaliifa Xaftar oo ah Jeneraal ay taageeraan dowladaha reergalbeedka iyo kuwa Carabta.
Wararka Liibiya ka imaanaya ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda Alwifaaq ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta saldhigga cirka Alwidyah oo ahaa halkii laga maamulayay howlgalkii Xaftar uu ku qabsan lahaa magaalada caasimadda ah ee Daraabulis.
Melleteriga xukuumadda alwifaaq ayaa ku dhawaaqay in ay burburiyeen qalabka difaaca cirka oo dowladda ruushka ay ugu deeqday maleeshiyaadka dagaal ooga khaliifa xaftar.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in aroornimadii hore ee axadda duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday saldhigga meleteri ee Alwidyah lagu burburiyay nidaamka difaaca cirka ruushja ee loo yaqaan S1 kadibna waxaa xigay weerar xoog ku gal ah oo ciidamada Alwifaaq ay ku qabsadeen saldhigga
Afhayeen uhadlay howlgalka Burkaanul qadab ee xukuumadda Alwifaaq ayaa sheegay in diyaarad drone ah ay ku beegsadeen qalabka saacado yar kadib markii lageeyay Liibiya waxaana laga keenay dhanka wadanka imaaraatka carabta sida uu hadalka u dhigay.
Boqolaal kamid ah dagaalyahannada xukuumadda Daraabulis ayaa ku dhax dabaal degayay saldhigga Melleteriga Alwidyah saacado kadib markii ay qabsadeen maleeshiyaadka Khaliifa Xaftar.
Muuqaal Video ah oo melleteriga alwifaaq uu ku baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay diyaarado cardaadiqaha ka dhigaya manduumada difaaca cirka S1 oo ah qalab ruushku uu dhawaan ugu deeqay khaliifa xaftar si uu isaga waabiyo weerarada uga imaanaya xukuumadda alwifaaq ee taageerada ka helaysa Turkiga iyo Qadar.
Qabsashada saldhigga Alwidyah ee xukuumadda Alwifaaq ayaa ka dhigan in lasoo afjaray hamigii maleeshiyaadka Xaftar ee ku aadanaa in ay sii qabsadaan magaalooyinka dhaca galbeedka Liibiya gaar ahaan deegaannada muhiimka ah ee ku dhow xuduud beenaadka Tuunis.
Saldhigga ciidamada Itoobiya ee degmada Baardheere oo weerar culus la kulmay.